Britain: Damian Green, ku-xigeenkii R/Wasaaraha oo isu casilay fadeexad darteed – Kasmo Newspaper
Britain: Damian Green, ku-xigeenkii R/Wasaaraha oo isu casilay fadeexad darteed
Updated - December 21, 2017 7:57 am GMT
London (Kasmo), Waxaa saacadihii hore ee fiidnimadii xalay xilkiisii iska casilay, Damian Green, Xildhibaan Conservative ah isla markaana ahaa Ku-xigeenkii iyo gacantii midig ee Ra’iisal Wasaaraha, Theresa May.
Wuxuu ahaa mas’uulka 2aad ee Xukuumadda (First Secretary of State), wuxuuna si lama filaan ah bartanka uga galay baaritaan lagu waday tiro Wasiirro ah oo lagu eedeeyay in ay ku kaceen falal anshax xumo ah oo ka soo horjeedda heerkii laga rabay madaxnimada.
Waxaana sheekadu la gashay raad hore oo sannadkii 2015kii, gabar lagu magacaabo Kate Maltby kana mid ahayd dhallinyarada hawlwadeennada Xisbiga Conservative oo ku ashtakootay in uu si damac ku jiro u laacay.
Waxaa markaas soo shaac baxday in kombiyuutarkiisa xafiiska Barlamaanka laga helay kumannaan sawirro oo muuqaallo qaaqaawan ah, sannadkii 2008dii oo markii hore uu ka bixiyay warar is-khilaafsan, markii dambase qirtay in uu gaf sameeyay. Mr Green wuxuu xilligaas ka tirsanaa Mucaaradka isaga oo hayay xilka Wasiirka daaha ku jira (Shadow Cabinet Minister) ee Waaxda Socdaalka.
Istiqaaladda siyaasigan 61 jirka ah waxay jug xanuun badan ku noqonaysaa Theresa May, waayo wuxuu ahaa saaxiib ilaa xilligii Jaamacadda Oxford, ninka ay ugu kalsoonida badnayd Xukuumaddeeda nugul kuna kala jaban khilaafka Brexit ee gudaha Xisbiga.
Istiqaaladdiisa waxaa looga dhawaaqay Downing Street, ka dib markii sidaas ay ka codsatay, iyada oo waliba ka xun, Ra’iisal Wasaare Theresa May; lamana filayo magacaabista beddelkiisa ilaa uu ka curanayo sannadka cusub ee 2018ka.
Laba Wasiir oo ka tirsanaa Xukuumadda May ayaa bishii hore isu casilay, toddobaad gudihiis, sida Wasiirkii Gaashaandhigga, Michael fallon (1dii Nofember), iyo Wasiirkii Horumarinta Caalamiga, Priti Patel, (8dii Nofember).
Istiqaaladdan 3aad waxay ku noqon kartaa, nabar weyn oo aanay ka soo kaban, badbaadada siyaasadeed ee hoggaamiyaha Conservative-ka ah, oo iyada qudheedu caddeysay “in ay aad uga tiiraanyootay”.